Durcal, wachi yelocator ine GPS yevana nevakuru | Nhau Gadgets
Nharembozha nemikana yatinopiwa kuitira kuti tiwane vanhu vakuru nevana zvave kutonyanya kutengeka uye kusvikika. Sarudzo yekupedzisira yakauya patafura yekuongorora inobva kune imwe femu inonzi ducal uye isu tichaiongorora kuti tione kana ichinyatsopa hunyanzvi hwekuita muchikamu ichi.
Isu tinoongorora kuti ndeapi maitiro uye mashandiro ayo kuti tizive kuti vadiki vako varipi nguva dzese uye, hongu, zvakare vakuru vako.
2 Zvimiro uye zvinoshanda
Wachi iri nyore uye inoshanda. Iyo ine diki pani asi inoonekwa zvakakwana, mairi isu tine ruzivo rwekutanga senge bhatiri, matanho akatorwa, zuva uye nharembozha. Kugadzirisa kushoma mune ino chimiro.
Iyo bracelet yakareruka, yakabatanidzwa mumuviri wesilicone, Mapini maviri ekuchaja uye ropa reokisijeni uye pulse sensor inoramba iri muchikamu chayo chezasi. Aya maviri ndiwo ega masensa ane mudziyo padanho rekugona, mukuwedzera kune mamwe ese ehunyanzvi hunhu hwatichataura nezve pazasi.
Zvimiro uye zvinoshanda
Padanho rekugadzira uye rekugadzira, wachi inotsvaga zviri nyore, minimalism uye kuramba, pasina chero kunyepedzera. Chidzitiro hachisi chekubata, kufamba nesarudzo isu tichadzvanya bhatani repakati, nemoyo mutsvuku sechiratidzo. Kuburikidza naro tinogona kuona kurova kwemoyo, okisijeni yeropa, mameseji uye pakupedzisira kudzima wachi.
Wachi ine maikorofoni, mutauri uye nharembozha, sezvatareva, ine yako nanoSIM kadhi inosanganisirwa. Kuti tizviise tinofanira kubvisa zvidimbu zviviri zviduku zvine screwdriver yakabatanidzwa. Kune chikamu chayo, zvakare ine yambiro yekudonha yakangwara, wachi inozviona otomatiki uye kutumira yambiro kune iyo Durcal application.
Iye zvino yave nguva yekutaura nezve application. Ndicho chinhu chekutanga chatinofanira kurodha, zvizere Yemahara kune ese ari maviri Android uye iOS uye inotitendera kutsvaga wachi, kutonga mamwe ma paramita, kuiwiriranisa uye, hongu, kugamuchira yambiro yambotaurwa.
Iyo nzira ye kuwiriranisa zviri nyore:
Isu tinorodha application uye tinogadzira account nefoni yedu
Isu tinobatidza wachi mushure mekuisa nanoSIM
Isu tinoongorora barcode neIMEI
Iyo wachi uye iyo app ichaenderana otomatiki
Chokwadi ndechekuti iyo synchronization system iri nyore kwazvo uye inokosheswa. Zvisinei, hatifaniri kukanganwa kuti nokuda kweizvi tichada kuunza kadhi rinosanganisirwa, uye zvechokwadi chibvumirano cheMovistar Prosegur Alarmas chirongwa:
Kubhadhara pamwedzi nekugara kwemwedzi gumi nemiviri kwe €19/mwedzi
Kubhadhara kwepagore kwe €190
Tinofanira kurangarira kuti kana tikakanzura sevhisi gore risati rasvika, tinotofanira kubhadhara mari yemwedzi yasara kusvika kumwedzi gumi nemiviri. Hongu zvirokwazvo, zvirongwa izvi zvose zvinosanganisira wachi zvachose pasina muripo.
Muchidimbu, iyi hurongwa hwekubhadhara kunyorera huchatitendera kuti tive nevana vedu, vakuru uye vanovimba "vanodzora". Nekudzvanya kwemasekonzi matatu pabhatani chete rainaro, Isu takakwanisa kuona kuti mumasekonzi mashoma sei Movistar Prosegur Alarmas nyanzvi dzinosangana kuti ive nechokwadi chechimiro chemushandisi uye kupindira kana zvichidikanwa, kuwedzera kune:
Gamuchira zviziviso muDurcal app nezve chero mhando yekudonha
Ongorora zviratidzo zvakakosha zvemushandisi wewachi
Pima nhanho uye udzore nzira dzakagadzirwa neGPS
Zviziviso zvekusvika uye zvekusimuka kuenda kunzvimbo dzenguva dzose
Nzvimbo iripo neGPS
Autonomy kweanenge mazuva gumi nemashanu
Hapana mubvunzo kuti imwe nzira yekukwanisa kuwana runyararo rwepfungwa, pamutengo, hongu, asi inopa chaizvo izvo zvainovimbisa maererano nekuita uye kugona, pasina chero kunyepedzera kupfuura izvo zvinopihwa mukatalogi. Unogona kuitenga zvakananga kuburikidza newebhusaiti yayo kana kufonera 900 900 916 uye chibvumirano chechirongwa chinokugutsa iwe zvakanyanya, uchachigamuchira mukati memaawa makumi mana nemasere echibvumirano.
Yakatumirwa pa: 30 March we2022
Kugadziridza kwekupedzisira: 27 March we2022
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Durcal, wachi yelocator ine GPS yevana nevakuru
SPC Smart Ultimate, sarudzo ine mari chaiyo